Gabar Wariye ah oo jirdil loogu geystay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Gabar Wariye ah oo jirdil loogu geystay Muqdisho
Gabar wariye ah oo ka tirsan saxafiyiinta ka howl gala Radio Kulmiye ayey ciidamada dowladda Soomaaliya jirdil ugu geysteen magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo ka tisan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa Jirdilka Iyo dhaawaca u geystay gabar wariye ah oo lagu magacaabo Fardowso Mahamud Sahal oo ka tirsan hawlwadeenada Radio Kulmiye Knn ee magaalada Muqdisho.
Sida ay xaqiijisay wariyaha la jirdilay ee Fardowso, ciidamada ayaa jirdil xoog leh u geystay xilli ay ku jirtay tabinta bannaanbax dadweyne oo ka socday agagaarka tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. Jirdilka loo geystay saxafiyadda ayaa sababay dhaawac muuqda oo dhawr meel oo jirka ah kasoo gaaray. Ciidamadii jirdilka geystay ayaa qaatay agabkii shaqada iyo Telfoonkii gacanta ee Wariye Fardowsa.
Falkani waxa uu dhibaato ku yahay shaqada warbaahinta madaxa bannaan iyo wariyeyaasha ee ka how gala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, mana ahan markii u horreysay ee fal nuucaan oo kale ah ay ciidamada dowladdu kula kacaan gabar wariye ah oo ku guda jirta howl maalmeedkeeda shaqo!
Bannaan-baxayaasha ayaa ahaa waalidiin ka cabanayay caruurtoodii oo la askariyeeyay kuwaasoo ku maqan tababar aan la aqoon xilliga uu qaadan doono, iyadoo arrintani aysan si rasmi ah uga hadlin madaxda dowladda Soomaaiya gaar ahaan madaxweynaha iyo Agaasimaha hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo si gaara loogu eedeynayo in ay ka dambeeyeen in la askareeyo dhallinyarada.